घाँटीको समस्याबाट तुरुन्त राहत पाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपचार
धेरै मानिसहरुलाई चिसो मौसममा घाँटी सुक्ने, घाँटी खसखसाउने, जिब्रोको तल्लो हिस्सामा सरसराउने जस्ता समस्याहरु देखिन्छन् ।
यदी तपाईलाई पनि चिसो मौसममा घाँटीको समस्याले दुःख दिइरहेको छ भने अपनाउनुहोस यस्ता घरेलु तरिकाहरु:
एक चम्चा मह पिइसकेपछि थोरै पानी पिउनुहोस । यसले घाँटीलाई तुरुन्त राहत मिल्छ । कफको समस्या बाट पनि आराम मिल्छ । तपाईले चाहानुभएमा कागतीको रस र मह मिसाएर पनि पिउनसक्नु हुन्छ ।
२. तुलसीको चिया पिउनुहोस
घाँटीमा धेरै खसखस भएमा तुलसीको चियाले धेरै राहत दिन सक्छ । यसले घाँटीको सबै समस्याहरु टाढा भाग्छन् र यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन् ।
घाँटीमा खसखस भएमा क्यान्डीको सेवन गर्नुहोस । बजारमा घाँटी दुखेको ठिक गर्ने कैयौं प्रकारका क्यान्डी आँउछन् । यसले धेरै राहत दिन्छ र घाँटी सुन्निएको पनि ठिक हुन्छ । तर, एक दिनमा जम्मा ५ वटा क्यान्डी सेवन गर्नु ठिक हुन्छ ।
४. सुप पिउनुहोस
तातो तातो सुप पिउनाले घाँटीलाई चिसो पुग्छ । घाँटीमा खसखस हुँदा तपाईको शरिर डिहाइड्रेट हुन्छ र तपाईलाई तरल पदार्थको आवश्यकता हुन्छ । सुप पिउनुहोस यसले घाँटीको समस्या कम हुन्छ तपाईलाई राहत मिल्छ ।
५. पत्ताको रस
पालकको पत्ताको रस निकालेर त्यसले कुल्ला गर्नाले घाँटी दुखेको कम हुन्छ । आपको पातलाई पोलेर त्यसको धुँवा सुँघ्नाले पनि आराम मिल्छ । तेज पत्तालाई पानीमा उमालेर त्यसलाई कुल्ला गर्नुहोस घाँटीको समस्या कम हुन्छ ।
६. लौकाको रस
लौकाको रस निकालेर त्यसमा थोरै मह र चिनी मिसाएर पिउनाले पनि घाँटीको पिडाबाट राहत मिल्छ ।